समाचार - एमिनोगुआनिडाइन हाइड्रोक्लोराइडको सुरक्षित प्रयोग र भण्डारणको लागि आवश्यकताहरू
सुरक्षित प्रयोगको लागि आवश्यकताहरू
एमिनोगुआनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड प्रयोग गर्दा सुरक्षामा ध्यान दिनुहोस्, किनकि यो एक विषाक्त रसायन हो। यदि त्यहाँ सुरक्षा समस्या छ भने यसले असीमित नोक्सान भोग्न सक्छ। सुरक्षित प्रयोगको लागि निम्न आवश्यकताहरू छन्।
१. हामीले सुरक्षा संरक्षणमा राम्रो काम गर्नुपर्दछ। कर्मचारीले विषाक्त रसायनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनबाट जोगिन सुरक्षा उपकरणहरू लगाउनु पर्छ।
२. चुहावट रोकथाममा राम्रो काम गर्नुहोस्। एक पटक चुहावट भयो भने, यसले वातावरण र कर्मचारीलाई सुरक्षा खतरामा पार्दछ।
Use. प्रयोग पछि, ग्लोभहरू ह्यान्डल गर्नुहोस् जुन एमिनोगुआनिडाइन हाइड्रोक्लोराइडमा पर्दाफास भयो।
एक शब्दमा, एमिनोगुआनिडाइन हाइड्रोक्लोराइडको प्रयोगको कडा आवश्यकताहरू छन् र अन्धाधुन्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन। सही अपरेसनले सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दछ। यदि तपाइँसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने एक पेशेवर रसायन निर्मातासँग परामर्श लिनुहोस्।
एक विषाक्त रसायनको रूपमा, एमिनोगुआनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड भण्डारणको लागि उच्च वातावरणीय आवश्यकताहरू छन्। यदि यो राम्रोसँग भण्डारण गरिएको छैन भने, यो कार्य सम्पादन गर्न र सुरक्षा दुर्घटनाहरूको कारण गर्न सजिलो छ। निम्न दुई पोइन्टहरु ध्यान भण्डारणको समयमा ध्यान दिनु पर्छ।
१. सुन्दर ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्
किनभने एमिनोगुआनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड गरम हुँदा विघटित हुनेछ, र यो एक विषाक्त पदार्थ हो, विघटन पछि यसको वातावरणमा प्रभाव हुनुपर्दछ। त्यसकारण यसलाई चिसो ठाउँमा राख्नुपर्दछ, ताकि त्यहाँ तातो वाष्पीकरण हुँदैन।
२ छुट्टै छाप लगाइन्छ
एमिनोगुआनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड प्याक गर्नुपर्दछ र छुट्टै छाप लगाउनु पर्छ। यो अन्य रसायनहरूको साथ भण्डारण गर्न सकिदैन। सबै पछि, यो विषाक्त छ। गोदाममा स्पष्ट स्थानहरूमा सुरक्षा चेतावनी संकेतहरू राख्नु आवश्यक छ। यो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एक प्रभावकारी तरीका हो।
एमिनोगुआनिडाइन हाइड्रोक्लोराइडको भण्डारणको लागि सावधानी अपनाईएको छ। भण्डारण गर्दा, तपाईंले यसमा ध्यान दिनै पर्छ, ताकि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्रदर्शन प्रभावित हुँदैन।